Jordana Spiro – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Fear Street Part One: 1994 (2021) Unicode Netflixရဲ့ဇာတျကားကောငျးလေးလာပါပွီ……. ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ၁၉၉၄ခုနှဈအမရေိကနျနိုငျငံမှာရှိတဲ့မွို့လေးနှဈမွို့အကွောငျးကို ရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီမွို့လေးနှဈမွို့ဟာ ဘေးခငျြးကပျရပျအနီးနားမယျရှိနပေမေဲ့ အခွအေနတှေကှောခွားလှပါတယျ။ ဆနျနီဗေးလျမွို့ဟာ သာယာဝပွောပွီး စီးပှားဖွဈသလောကျ ရှိတျဒီဆိုဒျမွို့ကတော့စုတျပွတျနုံခြာနပွေီး လူသတျမှုတှလေညျးခဏခဏဖွဈလရှေိ့ပါတယျ။ ဘယျလိုအကွောငျးတှကွေောငျ့ဒီလိုဖွဈရသလဲဆိုတာတော့ ပရိတျသတျကွီးတို့ကခံစား ကွညျ့ရှုလိုကျကွပါဦးနျော။ ဒီကားဟာဆိုရငျ R.L. Stine ရဲ့ Best-Selling Fear Street Book Series ကို အခွခေံရိုကျကူးထားတာဖွဈပွီး။Part -1(1994), Part – 2(1978), Part -3(1666) ဆိုပွီး ၃ကားတှဲ တဈပတျခွားစီဆကျတိုကျထှကျလာမယျ့ Trilogy Event လညျးဖွဈပါတယျ။ Credit Review ဒီဇာတျကားကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Mia Mina ဖွဈပါတယျ Zawgyi Netflixရဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးလာပါပြီ……. ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ၁၉၉၄ခုနှစ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြို့လေးနှစ်မြို့အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမြို့လေးနှစ်မြို့ဟာ ဘေးချင်းကပ်ရပ်အနီးနားမယ်ရှိနေပေမဲ့ အခြေအနေတွေကွာခြားလှပါတယ်။ ဆန်နီဗေးလ်မြို့ဟာ သာယာဝပြောပြီး စီးပွားဖြစ်သလောက် ရှိတ်ဒီဆိုဒ်မြို့ကတော့စုတ်ပြတ်နုံချာနေပြီး လူသတ်မှုတွေလည်းခဏခဏဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုအကြောင်းတွေကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရသလဲဆိုတာတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးတို့ကခံစား ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော်။ ဒီကားဟာဆိုရင် R.L. Stine ရဲ့ Best-Selling Fear Street Book Series ကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး။Part -1(1994), Part – 2(1978), Part -3(1666) ဆိုပြီး ၃ကားတွဲ တစ်ပတ်ခြားစီဆက်တိုက်ထွက်လာမယ့် ...
IMDB: 6.2/10 12K votes